mai 2016 – mada-iradio
Vue d’ensemble des dans le monde Nombre total de cas total: 50 591 307 Guérisons: 33 114 335 Décès: 1 258 817 Ny COVID-19 dia areti-mifindra ateraky ny viriosy coronavirus. Ny ankamaroan’ny olona manana COVID-19 dia tsy dia ahitana soritr’aretina loatra ety ivelany ary ho sitrana nefa tsy nisy fitsaboana manokana ka tsara ny ahafantaranao ny mombamomba izany . […]
Ny famoaham-peo ho an’ny daholobe dia mivarotra ny katalaoginy amin’ny volana Jona. Radio France dia nanambara antsipiriany momba ny firaketana vinyl 8000 mahery hamidy amina lavanty ampahibemaso. Ny firaketana rehetra dia dika mitovy mozika avo roa heny avy amin’ny fanangonam-bokatra 1,6 tapitrisa mahery. Voalamina amina sokajy 10, ny rakitsoratra dia mipoitra ny pop frantsay avy […]